नेपाल टेलिकमको सेवा बारे सबैभन्दा धेरै उजुरी, के गर्दैछ व्यवस्थापन नेटवर्क र गुणस्तर सुधार्न ? - Technology Khabar
» नेपाल टेलिकमको सेवा बारे सबैभन्दा धेरै उजुरी, के गर्दैछ व्यवस्थापन नेटवर्क र गुणस्तर सुधार्न ?
Technology Khabar २७ श्रावण २०७७, मंगलवार
मोबाइल नेटवर्क सेवा प्रदायक मध्ये सबैभन्दा धेरै उजुरी र गुनासो नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड(नेपाल टेलिकम)को नाममा रहेको छ ।
सामाजिक संजालमा सँधैजसो एनसेल आजीयाटा लिमिटेडको सेवाको बारेमा आक्रोश हुने गरेको देखिएपनि उजुरी भने नेपाल टेलिकमको सबैभन्दा धेरै आउने गरेको देखिएको छ ।
नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार मोबाइल अपरेटरहरुमध्ये र उजुरी परेको मध्ये सबैभन्दा धेरै नेपाल टेलिकमको विरुद्धमा रहेका छन् ।
प्राधिकरणकाअनुसार नेपाल टेलिकमको नेटवर्क, गुणस्तर, सेवा शुल्क र अनावश्यक रकम काटेको बारेमा अत्यधिक उजुरी र गुनासो रहेको छ ।
तथ्यांकअनुसार नेपाल टेलिकमको विरुद्ध गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४१ वटा उजुरी परेका थिए । जुन संख्या एनसेलको भन्दा करिब दोब्बर बढि हो ।
टेलिकमको उजुरीले मात्रै कुल उजुरीमध्ये ४१ प्रतिशतभन्दा बढि हिस्सा लिएको देखिन्छ ।
पछिल्लो दिनमा फोरजी नेटवर्क सेवा बिस्तार गर्दै गरेको र गुणस्तर सुधार गरेको दाबी गर्दै आएको सरकारी स्वामित्वको टेलिकमको विरुद्ध सबैभन्दा धेरै उजुरी परेको हो ।
केहि साताअघि मात्रै नेपाल टेलिमको बारेमा संसदको प्रविधि तथा विकास समितिमा समेत कम्पनीको नेटवर्क, सेवा र गुणस्तरको बारेमा सबैभन्दा धेरै प्रश्नहरु सांसदले सोधेका थिए । जसमा कयौं स्थानहरुमा नेटवर्क नै नभएको र नेटवर्क भएपनि गुणस्तर नभएको आरोप उनीहरुले लगाएका थिए ।
बैठकमा टेलिकम व्यवस्थापनले सांसदहरुको प्रश्नमा स्पष्ट जवाफ दिन सकेको थिएन भने उनीहरुले भनेको स्थानहरुमा टेलिकमको नेटवर्कको अवस्था के छ भन्ने समेत बताउन सकेको थिएन् ।
सो बैठकमा सांसदहरुले लगाएको आरोपको बारेमा ७ दिन भित्र जानकारी गराउन समितिले सोहि समयमा निर्देशनसमेत दिएको थियो ।
प्राधिकरणको उजुरी र गुनासोहरुको तथ्यांकले समेत सांसदहरुको प्रश्नलाई थप पुष्टि गरेको देखिन्छ ।
उजुरीमा मोबाइलबाट ब्यालेन्स रकम काटिएको, सिम कार्ड नै नचलेको, ४जी नेटवर्कको समस्या भएको, रिचार्जमा समस्या भएको, ल्याण्डलाइनमा समस्या लगायतका उजुरी र गुनासोहरु नेपाल टेलिकमको विरुद्धमा प्राधिकरणमा परेका थिए । जसमध्ये केहि समस्याहरु टेलिकमले तत्काल समधान गरेको छ भने अन्य समस्याहरुको समाधान बारेमा स्पष्ट जानकारी छैन् ।
त्यसैगरि दुई व्यक्तिहरुले दिएको उजुरीको आधारमा प्राधिकरणले छुट्टै कमिटि गठन गरेर नेपाल टेलिकमको बारेमा छानबिन समेत गरिरहेको छ ।
प्राधिकरणले सेवाग्राहीको रकम काटिएको बारेमा अनुगमन शाखाबाट कमिटि गठन गरेर अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिएको छ ।
दोस्रो ठूलो मोबाइल अपरेटर एनसेल आजीयाटा लिमिटेडको विरुद्ध भने प्राधिकरणमा गत आवमा २४ वटा उजुरीहरु परेका छन् । जसमा कम्पनीको नेटवर्कमा समस्या, रकम काटिएको, ४जी नेटवर्क नचलेको,लगायतका उजुरीहरु रहेका छन् ।
सो उजुरीहरुमध्ये एक उजुरीमा सेवाग्राहीले रकम काटिएको जानकारी गराएका छन् । जसमा नियमनकारी निकायले थप छानबिन गर्न अनुमगन शाखामार्फत कमिटि गठन गरेर नै छानबिन गरिरहेको छ ।
प्राधिकरणमा औपचारिकरुपमा आएका उजुरीहरु नेपाल टेलिकम र एनसेलको बारेमा मात्र रहेको देखिन्छ भने स्मार्ट टेलिकमको बारेमा कुनै उजुरी परेको छैन् ।
यूनाईटेड टेलिकम लिमिटेडको बारेमा भने बन्द रहेका टावरको विषयमा उजुरी परेको थियो । र यो निकै लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको विषय रहेको छ ।
वाणिज्य बैङ्कहरूले विदेशी मुद्राको प्रिपेड कार्ड जारी गर्न पाउने